Ezi ziimpawu zeSole | Ngeentlanzi
Asinakuphika ukuba Wedwa Ngenye ye iintlobo kweyona ntlanzi ithandwayo ehlabathini. Akumangalisi ukuba ukuyikhankanya nje, siqinisekile ukuba ngaphezulu kwesinye baya kuva ngayo. Iimpawu zayo zinomdla kakhulu, ke ngekhe kube buhlungu ukuzijonga.
Njengento yokuqala yokubeka izimvo, kufuneka sitsho ukuba, nangona sizalwe njenge- intlanzi Ngokuqhelekileyo, i-Sole ibhukuda ngokuma nkqo kwaye, njengoko ikhula, yamkela indawo ethe tyaba. Ithathwa njengentlanzi enomdla, kuba inombala omdaka-mdaka, kunye namabala ajikelezileyo amnyama kunye nokukhanya.
Intloko yentloko incinci kwaye irhangqiwe, inamehlo amancinci. Ukongeza, kufutshane nomlomo unamahlumela esikhumba, kunye nebala elimnyama kwi-pectoral fin. Kwelinye icala, yakhe ixesha lonyaka Ihlala iqhutywa phakathi kweenyanga zikaNovemba kunye noDisemba, nango-Epreli noMeyi.
Bahlala bahlala emanzini anetyuwa, elwandle, kubunzulu obunokuba malunga neemitha ezili-100. Ayidla ngokuvela kolu hlobo lwe indawo yokuhlala, apho ikwazi nokuhambisa ukutya kwayo ngokuchanekileyo, esekwe ikakhulu kwezinye iintlanzi ezikuloo ndawo.
Kwelinye icala, kufuneka sigqamise igama elaziwa ngalo ngokwesayensi. Kwaye iSole yeyaseSaleidae, ekubeni iyintlanzi ipluronectiform, ebizwa ngokwesayensi ngokuba nguSolea solea okanye uSolea vulgaris. Amagama ayichaza ngendlela ebhetele.
Inyaniso kukuba i-sole eqhelekileyo inentando yayo, kungekuphela kweempawu zayo, zona ngokwazo kakhulu umdla, kodwa nakwizinto ezithile ezizodwa ezenza ukuba umdla. Luhlobo lwezinto ezininzi ezaziwayo kunye nokuba zeziphi iinkcukacha ezitsha ezifundwayo ngokuqhubekayo. Uhlobo lweentlanzi ekufuneka ulumkele.
Iinkcukacha ezithe xaxe - IYellowtail Damsel
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Enye yezona ntlobo zidumileyo, yiSole